Home Ngwongwo ihe eji ehi ura Ngwaahịa Memory Foam 5 zones mmiri Mattresses Colchones Matelas | Rayson
Ulo > Ngwaahịa > Mmiri matarasị > Na-aga n'ihu Mmiri matarasị
Home Ngwongwo ihe eji ehi ura Ngwaahịa Memory Foam 5 zones mmiri Mattresses Colchones Matelas
Ohiri Isi Top
Nanị, Eze Single, Full, Queen, King
N'akpa uwe Mmiri
Mmiri akwụkwọ ikike:
Afọ 15 eji eme ihe
15,000 PC kwa ọnwa
Ewepụghị abịakọrọ + pallet / akpọrepu katọn / akpa
Workingbọchị 15 na-arụ ọrụ maka ịme ihe nlele, ụbọchị 30 na-arụ ọrụ maka imepụta oke
Memory ụfụfụ 5 zones mmiri Mattresses ka nke n'akpa uwe mmiri, na 5 Mpaghara elu njupụta ụfụfụ.
Okomoko, mara mma, imewe ọgbara ọhụrụ.
Enwere ike ịhazi ogo na usoro ọ bụla.
1.TSUKWAS YOUR SPINE
Anyị na-ewebata latex latex dị ka nkasi obi oyi akwa. Ọ na-agbanwe agbanwe n'ahụ gị. Na-akwado nhazi nke anụ ahụ nke spain.
Ejiri etiti ụfụfụ na-echekwa etiti dị n'etiti, dị jụụ ma dịkwa jụụ. Foamfụfụ ebe nchekwa na ahụ ọkụ nke na-achọpụta, jiri nwayọọ nwayọọ na-adị nro, mgbe ị na-a pressurea nrụgide ahụ iji dozie ahụ ahụ nke ọma.
3. IHE MMADURE KWESTRESS KWESTR.
Anyị na-eji ụfụfụ njupụta dị elu dị ka isi maka ike na nkwụsi ike. Ọ bụ ihe dị mkpa iji jikọta ya na nrụgide kachasị njọ na nkasi obi na-enweghị atụ.
4.ZERO Partner Nsogbu
Onu mmadu na-agbanwe ebe ihi ura.
5. KWURU AH B AH PA
Matrais Rayson na-akwado akwa nkpuchi zuru oke siri ike, nke na-ebelata ihe mgbu ahụ gị.
Afọ 6.15 nke nkwa mmiri
Rayson spring matarasị, mere nke nụchara anụcha, afọ 15 nkwa nke mmiri lifespan.
Rayson ma ọ bụ OEM
Soft / Ọkara / Ike
Single, ejima, zuru, eze nwanyị, eze na ahaziri
Ejiri akwa / akwa Jacquad / akwa Tricot | Ndị ọzọ
30cm ma ọ bụ ahaziri
/Lọ nkwari akụ / /lọ / apartmentlọ / ụlọ akwụkwọ / Ọbịa
Ihe nlele 15, Iwu iji 25-30 ụbọchị
Ugboro abụọ (Ohiri Isi Top, 30cm Elu)
Uwe a kpara akpa, dị oke ọnụ ma dị mma
1000 # polyester
2cm elu njupụta ebe nchekwa ụfụfụ
2cm ụfụfụ siri ike
Non kpara akwa
3cm ụfụfụ njupụta dị elu
2cm ụfụfụ Soft
22cm 5 mpaghara Pocket mmiri na etiti
na-abụghị kpara akwa
1cm ụfụfụ adụ
kpara akpa, dara oké ọnụ ma na ala
Nkwari akụ mmiri m kpoo Akụkụ
Site na Inch
Site na centimita
Ibu Ibu / 40 HQ (PC)
Single XL (Ejima XL)
Ugboro abụọ (zuru)
XL ugboro abụọ (XL zuru ezu)
Ihe dị mkpa m kwesịrị ikwu:
1. Ma eleghị anya, ọ dị obere dị iche na ihe ị chọrọ n'ezie. N'ezie, ụfọdụ oke dịka ụkpụrụ, nhazi, ịdị elu na nha enwere ike ịhazi ya.
2. Ma eleghị anya, ị na-mgbagwoju anya banyere ihe bụ ike nke kasị mma-ere mmiri matarasị. Ọfọn, ekele na 10 afọ ahụmahụ, anyị ga-enye gị ụfọdụ ọkachamara na-adụ ọdụ.
3.Our isi uru anyị bụ inyere gị aka ịmepụta uru.
4.Anyị nwere obi ụtọ ịkọrọ gị ihe ọmụma anyị, naanị gwa anyị okwu.
Advanced kpara akpa
Rayson fabric, curve modern design, especially for kitted fabric, breathable, ọzọ eco-enyi na enyi na inogide. N'etiti etiti eji ọchịchịrị agba nwere ike ịdị mfe ịmata ọdịiche dị na mpaghara 3 matraasi, ọ dabara nke ọma na akwa a.
Ohiri isi n'elu imewe
Matrasị ohiri isi n'elu imewe, ọ bụ dị iche iche si nkịtị uko top na Europe top. Ọ na-eme ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị nwere oke, akụkụ curved mara mma, okomoko na ejiji.
Ọmarịcha akụkụ 3D mara mma
A na-akpachapụ akụkụ atọ ndị gbara ya gburugburu nke ọma, ahịrị ndị ahụ dị mma ma dịkwa nro, akwa ndị ahụ dịkwa nro na iku ume.